Ọganihu Na-arịwanye Elu Na-arịwanye Elu na Bangkok - HGH Therapy na Thailand
Ọganihu nke mmadụ na-eto eto megide ime agadi. Ihe ndị na-esi na ọnwụnwa na-agwọ ọrịa na Thailand.
Na 1999, Ụlọ Ọrụ Mba na Thailand na ịka nká emewo ka otu n'ime ọtụtụ ọmụmụ ihe dị mkpa dị mkpa maka ịdị irè nke nnyefe ọgwụgwọ na iji ojiji nke ụmụ mmadụ na-eto eto (HGH) .Ebumnuche nke ọmụmụ a bụ ebumnobi na ọ bụghị naanị ịnwa ịnwapụta mmepụta nke ọgwụgwọ HMH, ma na-eduzi ọmụmụ ihe ziri ezi nke ga-eme ka ahụike ahụike gbasara nnwere onwe nke HGH na-eme agadi. E kewara ndị na-amụ ihe na abụọ. Ndị otu a nabatara njehie HGH, ebe ndị otu nchịkwa natara injections nke placebo.
Nnyocha abụọ HGH
Ọmụmụ ihe site na okike bụ mmadụ abụọ kpuru ìsì, yabụ, ndị dọkịta ma ọ bụ ndị ọrịa amaghị onye natara ọgwụ ọjọọ nke HGH, mana onye gbanyero ebe placebo. Ọmụmụ ihe a bụkwa ihe omume mba na-agụnye ụlọ ọgwụ sitere n'ofe Thailand. Soro n'ule ndị ahụ, ma ndị ọrịa ma ụfọdụ nwere mgbaàmà nke adịghị ike nke hormone na-eto eto. Otu ihe nke ihe ọmụmụ ahụ dị ịrịba ama n'ịdị elu ma nwee ike inye nnukwu ọrụ nke ịdabere na ike iji chọpụta ọbụna obere ihe dị mkpa.
Ngwunye HGH tinyere ọgwụ ndị ọzọ
Ọ bụ ezie na a na-etinyekarị ọmụmụ ihe a maka ọgwụgwọ ngbanwe site na iji hormone na-eto eto, ọ bụrụ na ọ dị mkpa, ndị ọrịa natara testosterone, progesterone na estrogen. Ebumnuche nke ọmụmụ a abụghị nanị iji gosipụta uru ndị bara uru nke hormone na-eto eto na dị ka hormonụ ndị ọzọ, dị ka testosterone, progesterone na estrogen. Ọ bụ ịkwalite nkwalite ọgwụ nke HGH injections.
Eji HGH mee ihe site n'aka onye ọrịa
Dr. Thierry Hertoghe, bipụtara otu ọmụmụ ihe ọmụmụ nke na-enye ọgwụgwọ nke HGH hormone maka ndị na-arịa ọrịa hormone. Ndị ọrịa a nwere nnukwu afọ. Onye nke kachasị nta bụ 27 afọ na onye ọrịa kachasị ọrịa 82. Ná mmalite nke ọmụmụ ihe ahụ, Dr. Hertoghe na ndị ọrụ ya ji nlezianya dekọọ ọnọdụ nke ndị ọrịa niile.
Mgbe ha dekọtara ọnọdụ ahụike nke ndị ọrịa ha, ha mere HGH hormone ọgwụ mgbochi na ọnwa abụọ. A chọtara Hertoghe na ndị ọrịa ya ma rịọ ha ka ha mejupụta nnyocha ha mere ka ha zaa banyere mmetụta nke ọgwụgwọ na-eji ajụjụ na-akọwa uru ndị ha nwetara site na nkedo nke hormone na-eto eto. Ndị na-esonụ bụ ndepụta nke ajụjụ nile nke ajụjụ a na pasent ndị ọrịa nabatara na-egosi na ọnọdụ ha ka mma.
Ihe omuma nke ihe omuma nke HGH na nká
Ọnụ ọgụgụ dị mkpirikpi nke wrinkles na ihu - 75,5%
Ọkpụkpụ bụ otu n'ime ihe ịrịba ama ndị a na-ahụ anya nke ịka nká. Akpụkpọ anụ amalite ịhapụ ngbanwe ya na njuputa ya ma kpaa ya dị ka eriri ọkụ na mmiri miri emi. Ọnụ ọgụgụ ka ukwuu nke ndị ọrịa na-erite uru site na mgbochi nke hormone na-eto eto, gosiri na HGH ejirila nwayọọ nwayọọ mee ma ọ bụ mee ka ndị wrinkles kwụsị. Injections na hormone na-eto eto na-enwe ike moisturize akpụkpọ anụ ahụ ma mee ka ahụ ike nke ahụ dị mma, bụ nke abụọ na-arụ ọrụ na njedebe nke wrinkles.
Tighter anụ na olu na ihu - 67%
Mgbe ụmụ nwoke na ụmụ nwanyị, ọkpụkpụ ahụ na-ada mbà n'okpuru akpụkpọ ahụ, na-eme ka akpụkpọ ahụ gbanwee n'ahụ ahụ. Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ụzọ abụọ n'ụzọ atọ nke ndị ọrịa Dr. Hertoghe kọrọ na site na ngbanwe nke ọgwụgwọ na mmụba ụmụ mmadụ na-eto eto na-ebelata akpụkpọ anụ n'olu na ihu. Injections nke HGH nwere ike ịmalite ụda ahụ nke ahụ, nke ghọrọ uru ya.
Mkpụrụ ahụ siri ike bụ 60.7%
Ihe kariri mmadu isii n'ime mmadu iri bu ndi a na-achoputa na Dr Hertoghe, n'ime onwa abuo nke HGH injections, ụda akwara gbanwere. Mmiri hormone nke mmadụ nwere ike ịba ụba, dịka ụda ahụ, na oke ahụ site n'ịgbanwe ọdịdị ọdịdị nke ahụ ike na ike ha. Ọ bụrụ na ndị ọrịa nwere ahụike dị elu nke hormone na-eto eto, akwara na-enweta ume na mmanụ ọkụ n'ụdị insulin dị ka ihe na-akpata 1, nke na-eme ka ike ahụ dịkwuo mma, karịchaa na ngụkọta na nri bara uru.
Ọdịdị dị ala nke anụ ahụ - 48%
Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ọkara ndị ọrịa bụ ndị sonyere ọmụmụ ihe a n'ihi HGH injections gbanwere akụkụ nkata ahụ. Mmiri hormone nke mmadụ na-arụ ọrụ dị mkpa na metabolism, nke na-emetụta nnọọ oke ahụ na nkwụnye nke anụ abụba na ahụ, ma karịsịa gburugburu etiti. Imeju na-emegharị HGH n'ime IGF-1, ma nwee ike ịkụda anụ ahụ na-adịghị mma ma gbanwee ya na ike ọzọ!
A thicker, siri akpụkpọ anụ na 34.5%
Ihe karịrị otu ụzọ n'ụzọ atọ nke ndị nabatara hụrụ mgbanwe dị ukwuu na ụda anụahụ. Ndị ọrịa a nwere mgbanwe na ọdịdị ahụ. Ihe si na ya pụta bụ nhụjuanya nke mọzụlụ na nhichapụ ụlọnga nke ọtụtụ mmadụ, ọ bụghị naanị nchịkwa na nsị akpụkpọ anụ nwere ike ịla n'iyi, ma mgbanwe mgbanwe ahụ na-enye aka mee ka ụda dịkwuo ike. Mkpụrụ akpụkpọ ahụ dị ka mkpụrụ ndụ ọ bụla n'ime ahụ chọrọ ịrụ ọrụ hydration kwesịrị ekwesị. Akpụkpọ anụ adịghị iche. Ihe dị iche bụ na akpụkpọ ahụ bụ otu akụkụ nke na-ahụkarị nrụgide ndị ọzọ, dị ka ìhè anyanwụ, okpomọkụ na ifufe. Na hormone na-eto eto nwere ike ichebe akpụkpọ ahụ site na ihe ndị dị na ya ma gbochie mmerụ ahụ, nke na-enyere anụ ahụ aka ịnọgide na-adịgide adịgide, siri ike ma guzogide mmebi.
Ikwu ntutu isi - 28,1%
Ihe karịrị otu ụzọ n'ụzọ anọ nke ndị na-amụ ihe na ọmụmụ ihe a nwere mgbanwe na ntutu isi ha n'ihi na e nwere mmụba nke mmadụ. Ọ bụ ezie na ihe a dị mma bụ ihe kachasị elu, otu akụkụ dị mkpa nke ndị were ọgwụgwọ HGH, tụlee ntutu dị mma n'ihi ọgwụgwọ. Mgbe mkpụrụ ndụ akpụkpọ anụ na-agbanyeghachi na rejuvenate n'ụzọ kwesịrị ekwesị, ọ na-emekwa ka ahụike nke ntutu isi. Igwe uhie bụ nanị ụdị akpụkpọ anụ nke na-emezighị emezi ka ahụike ahụike na-arụ ọrụ kpọmkwem na ahụ ike nke ntutu.
Ihe omimi na mmetụta uche nke germosilicate nke ọgwụgwọ hormone, mmụba mmadụ
Onu ogugu n'ogo n'ogo - 71,4%
Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ụzọ atọ n'ime ndị ọrịa nwere mmelite na ọnọdụ mmetụta uche. Enweghi oke hormone nke na-eto eto ruo ogologo oge mere ka enwelata ahụike na uche na nchọpụta nke ọmụmụ a na-enye ihe ọzọ na-egosi na ezughị oke hormone nke mmadụ nwere ike ime ka ọrịa ahụ ka njọ. Nye ọtụtụ ndị ọrịa, HGH nwere nnọọ ike ime ka ndụ kwa ụbọchị bụrụ ihe na-atọ ụtọ ma na-atọ ụtọ. Nke a bụ otu ebe n'ihi mgbanwe nke nghọta onwe onye nke na-esite na ngbanwe anụ ahụ nke na-apụta n'ime ahụ, mana HGH nwekwara ike nke kachasị ụbụrụ onu!
Onu ogugu enwere ike - 86.8%
N'etiti ndị ọrịa na-ekere òkè n'ọmụmụ ihe ahụ. Thierry, ihe fọrọ nke nta ka 9 si na ndị ọrịa 10 nweta ahụmahụ dị elu. Ọtụtụ ndị ọrịa na-arịa ọrịa, ụkọ HGH na-egosipụta dị ka ike ọgwụgwụ. HGH nwere ike ịme ahụ ahụ, na-enyere gị aka ịmụrụ anya ma dịkwuo njikere iji otu ụbọchị. Na hormone na-eto eto nwere ike nke a n'ihi ọtụtụ ihe. Otu n'ime ihe ndị kpatara ya bụ na ọ na-eme ka ikike ahụ nwee ahụmahụ kachasị dị na nlọghachi n'ihi ụra. Ihe ọzọ kpatara ya bụ na mbido anụ abụba, n'ihi IGF-1, na-enye ahụ dị elu nke ike na mpaghara dị elu.
Enwekwu ume anụ ahụ - 86,04%
Na mgbakwunye na iwuli elu ike izu ike, hormone na-eto eto na-enwe ike ịmekwu ikike anụ ahụ maka ndị na-arịa ọrịa hormone a.
N'ime 85% nke ndị na-aza ajụjụ na nsogbu ndị a. Thierry kọrọ na site na HGH injections emewo ka ikike na-arụ ọrụ na arụ ọrụ anụ ahụ. Na hormone na-eto eto na-ekpughe ọkwa dị elu nke metabolism nke na-enye mpi ahụ ume. Ọganihu a na ume na-eme ka ikike ahụ nwee ike ịnagide ọganihu nke ọrụ ahụ na mgbakwunye na mmụba nke iji ọrụ a eme ihe. Nakwa, HGH na-agbanwe ọgwụgwọ HGH na-eme ka ọnụọgụgụ ahụ nke ahụ gbakee mgbe ọ gasịrị mmega ahụ na mmerụ ahụ. Imeghachi omume Ịba ụba ọrụ n'oge awa ụra pụtara na I nwere ike ime ka ike gwụkwuo ma na-ejikarị ike ọgwụgwụ.
Ịnweghi ike ihi ụra n'oge na mmetụta ole na ole - 82,5%
Ngwakọta ọgwụ mgbochi na uto hormone nke mmadụ na-eme ka ahụ nwee ike inweta ọtụtụ n'ime ụra ya. HGH na-ezo ezo n'abalị ma nke a na-eme mgbe ahụ gbakere site na ike gwụrụ na iyi, akwa adọkọtara n'ụbọchị. Maka ndị ọrịa na-enweghị HGH, ahụ adịghị ahụ uru zuru ezu nke ụra ahụ ike ma mesịa na-ata ahụhụ na ya. Ọ bụ ezie na ihe kachasị bara uru kwesịrị ịrahụ ụra abalị ruo awa asatọ, ndị ọrịa nwere ogo HGH dị mma, ma ọ bụrụ na ọ dị mkpa, nwere ike ịrụ ọrụ nke ọma karịa obere ụra. Tụkwasị na nke ahụ, ndị ọrịa na-arịa ọrịa ụra na-abaghị uru, HGH nwere ike inye aka weghachi àgwà ọma nke ụra, na-eweghachi ụda circadian nke ahụ.
Enwekwu ike iji kwụsie ike - 83,7%
Nchegbu bụ otu n'ime ahụmahụ kachasị njọ nke ụwa oge a. Nchegbu na nchekasị nwere ike igbochi ihe niile site n'inwe obi ụtọ n'icheta onwe onye, ​​na-amụba ihe ize ndụ nke ọrịa anụ ahụ dịka ọrịa obi obi, ụra na ọrịa strok. Enwe ihe karịrị 4 nke ndị ọrịa 5 na ọmụmụ a na ọnwa abụọ ịgwọ HGH mgbatị nke nrụgide. Ndị na-arịa ọrịa HGH na-achọ ịbawanye ogo cortisol ma belata ọkwa ike, nke na-eme ka ha nwekwuo nsogbu.
Anyị na-atụ aro ka ị gụọ:
Malite ịzụ ahịa ugbu a!